I-Seaview @42 - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguEmma
Seaview @ 42 ligumbi lethu leendwendwe elitsha elihonjisiweyo. Ilungele ukuhamba uwedwa ukuya kwisixeko sethu esimangalisayo. Sihamba umgama we-10-15 ukuya esixekweni kunye namakhonkco ohambo olukhulu emnyango wethu. I-Seaview inayo yonke into onokuyidinga. Ilinen ecocekileyo yokulala. Iitawuli ezintsha. Amaziko okwenza iti nekofu. Ukufunda ukukhanya. Iincwadi zesikhokelo kunye neemephu. Indawo yedrowa. Wamkelekile indawo yokuxhoma. Kukho isipili esikhulu, isomisi seenwele kwaye sikwabonelela ngezinto zangasese kwigumbi lokuhlambela. Nceda ubone uluhlu lweenkcukacha zokupaka
Indawo yethu intle siphezulu phezulu kwiQueen's Park entle ekumgama wemizuzu emi-5 kuphela ukuhamba emantla eHanover. Kukho simahla kwindawo yokupaka ezitalatweni emva kwentsimbi yesi-7pm ngoLwesihlanu kude kube ngu-11am ngoMvulo. Ngaphandle kwala maxesha sine £ 2.50 iimvume zemihla ngemihla ezikhoyo ukuba uzithenge.
Kukho ii-pubs ezimangalisayo zasekhaya apho amatye alahlayo kunye neHanover Pub ethandekayo kunye ne-oveni yayo yepizza eyenziwe ngamaplanga kwikona yesitalato sethu. Sihamba 10-15 ukusuka ngaselwandle, pier kunye nombindi wesixeko. Sinonxibelelwano oluhle lwezithuthi zikawonke-wonke kunye ne-18 kunye ne-21 yeebhasi ezimisa kanye ngaphandle kwendlu yethu ezikusa kwi-pier, i-pavilion, i-Churchill square kunye nesikhululo sikaloliwe ngaphantsi kwe-10 mins. Ukhululekile ukusebenzisa izixhobo zasekhitshini kuquka iwasha kunye nesomisi. Sinegumbi elingaphantsi leWC kunye negumbi lokuhlambela elitsha elifakwe kwigumbi eliphezulu elinebhafu enkulu kunye neshawari yemvula. Kukho indawo entle ehonjisiweyo ngaphandle apho iindwendwe zikhululekile ukuba ziyisebenzise kwaye iyatshaya. Sinayo inja esilo-qabane kodwa ayivunyelwanga ukuba inyukele phezulu kwindawo yeendwendwe kwaye sinokubonelela ngeebhedi zasimahla zokungadibani xa siyicela.
4.71 out of 5 stars from 282 reviews
4.71 · Izimvo eziyi-282
Zininzi iipabhu ezithandekayo ezikufutshane nezinto esizithandayo yiHanover yepizza kunye neGeese ngezorosti zayo ezibalaseleyo kunye nesoseji kunye nemenyu yokucola. SinePepperpot entle phezulu kwiQueen's Park yasembalini kufutshane nekona kuthi. Ivenkile yethu yekofu kunye nesmoothie esiyithandayo yiWild Cherry Cafe ehamba ngemizuzu emi-5 ukusuka endlwini kunye neStarfish emangalisayo kunye neKofu yenye yezona zidlo zakusasa / ibrunch eBrighton.
Siya kufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho ungazibandakanya nekhaya kangangoko okanye kancinci njengoko uthanda.